လစ်ဗျား နိုင်ငံ ကို လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု စတင် | Freedom News Group
လစ်ဗျား နိုင်ငံ ကို လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု စတင်
by FNG on March 20, 2011	Operation Odyssey Dawn, Operation Ellamy ,Operation Harmatton LIBYA 101 LIVE
စပိန် နိုင်ငံ ၏ ရေငုပ် သင်္ဘောများ၊ ဖရီးဂိတ် စစ်သင်္ဘောများ နှင့် တိုက်လေယာဉ်များ လစ်ဗျား နိုင်ငံ အနီးသို့ ရောက်ရှိ
ကဒါဖီ က ကျူးကျော်သူများ ကို ပြန်လည် ခုခံ နိုင်ငံ ရန် လစ်ဗျား ပြည်သူများ ကို လက်နက်များ ထုတ်ပေး
လိုက်ပြီ ဟု ဆို
UAE နှင့် ကူဝိတ် နိုင်ငံ များ က အကူညီ ပေးထားသည့် Mirage နှင့် F 16 တိုက်လေယာဉ်များက
ကဒါဖီ ၏ လေကြောင်း ရန် ကာကွယ် ရေး စနစ် များ ကို ညသန်းခေါင်း ယံ အချိန် တွင် စတင်တိုက်ခိုက်
လစ်ဗျား နိုင်ငံ စံတော်ချိန် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ သတင်းများ တိုမား ဟောခ် ဒုံးကျဉ်များ က ကဒါဖီ ၏ လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး စနစ် ၏ ငါးဆယ်ရာခိုင်းနှုန်း ကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့
ကဒါဖီ က ကျူးကျော် သူ နယ်ချဲ့ များ ကို တိုက်ခိုက် ရန် ပြည်သူများ ကို လက်နက် တပ်ဆင်ပေးလိုက်ပြီဟုဆို
အီတလီ၊ စပိန် ၊ နော်ဝေ ၊ ဒိန်းမတ် တိုက် လေယာဉ်များ က ထရီပိုလီ ရှိ လစ်ဗျားလေတပ် စခန်း အယ်ဇါဝီရာ
ကို စတင်တိုက်ခိုက် (ကဒါဖီ ၏ နေအိမ် တစ်လုံး ကို ဗုံးထိမှန်ခဲ့)
ကဒါဖီ က လူသားဒိုင်းများ ကို အသုံးပြု၍ ၎င်း၏ ပုန်းခိုနေရာ အနီး တွင် ကာကွယ် ခိုင်းထား မြေထဲပင်လယ်ရှိ အမေရိကန် ရေငုပ် သင်္ဘောများ မှာ Tomahawk ဒုံးကျဉ်များ ဆက်တိုက် ပစ်လွှတ်
ဘရာဇီး တွင် ရောက်ရှိ နေသည့် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘာမား က ကဒါဖီ ၏ လေကြောင်းကာကွယ်
ရေး စနစ် ကို ဖျက်ဆီး နေပြီ ဟု ကြေငြာ
အမေရိကန် ဒုံးကျဉ် များ သည် အရပ်အသား များ ကို တိုက်ခိုက်နေသည် ဟု လစ်ဗျား ရုပ်သံမှကြေငြာ
အမေရိကန် ရေငုပ်သင်္ဘောများ မှ တိုမာဟောခ် တာဝေးပစ်ဒုံးကျဉ် အလုံး ၁၂၀ က ထရီပိုလီ မြို့ မှ
စစ်စခန်း များ ကို စတင် တိုက်ခိုက်
ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ် နှင့် ဗြိတိသျှ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်းက လစ်ဗျား သည် အပစ်အခတ်
ရပ်စဲ ရေး ကို ချိုးဖောက်နေသဖြင့် စတင် တိုက်ခိုက်နေပြီ ဟု အတည် ပြုပြောကြားသည်။
FNG ပြင်သစ်လေတပ် မှ Mirage တိုက် ခိုက် ရေး လေယာဉ် များ က လစ်ဗျား နိုင်ငံ ၏ စစ်ရေး
ပစ်မှတ်များ ကို လေကြောင်းမှ စတင် တိုက် ခိုက် နေပြီ ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်လေတပ် မှ တိုက်ခိုက်ရေး
ဂျက်လေယာဉ် များ က အတိုက်အခံ တို့ ထိန်းချုပ်ထားရာ ဘန်ဂါဇီ မြို့ ကို တိုက်ခိုက် နေသည့် ကဒါ
ဖီ ၏ တပ် များ ကို စတင် တိုက် ခိုက် ခြင်း ဖြစ်သည်။
Operation Odyssey Dawn ၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဖြစ်သူ အမေရိကန် ရေတပ်မှ U.S. Navy Adm. Samuel J. Locklear
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ၀င်ရောက် သတင်းယူခဲ့သည့် အယ်ဂျာဇီးယား သတင်းထောက် တိုနီ ဘာတလီ သည် ယခု လစ်ဗျား နိုင်ငံ ဘန်ဂါဇီ မြို့ မှာ နေ၍ နိုင်ငံ စုံ တပ် ဖွဲ့နှင့် လစ်ဗျား ဒီမို ကရေစီ လိုလားသည့် လက်နက် ကိုင်များ ၏ သတင်း များ ကို ပေးပို့ နေသည်။ မြေထဲပင်လယ်ရှိ မော်လတာ ကျွန်း နိုင်ငံ အနီး တွင် တပ် ဆွဲ ထားသည့် အမေရိကန် လေယာဉ် တင်
သဘောင်္မှ C130 အမြောက် တင် လေယာဉ်များ က လည်း ထရီ ပိုလီ မြို့ ရှိ ကဒါဖီ ၏ စစ်စခန်း
များ ကို လစ်ဗျား စံတော်ချိန် ည ၇ နာရီ အချိန် တွင် စတင် တိုက် ခိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ်များ အား မြေထဲ ပင် လယ် အတွင်း ရှိ သင်္ဘောများက ဒုံးလက်နက်
ဖြင့် ပစ်ကူပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
လစ်ဗျား နိုင်ငံ အနီးသို့ ရောက်ရှိ လာပြီဖြစ်သည့် ပြင်သစ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘော ချာလ်ဒီဂေါလ် ယခုတိုက် ခိုက်မှုများ သည် ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ၏ ဆုံးဖြတ် ချက် အမှတ် ၁၉၇၃
အရ တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး စပိန် တိုက် လေယာဉ် သုံးစီး၊နောဝေ တိုက်လေယာဉ် နှစ်စီး နှင့်
ဗြိတိသျှ တိုက်လေယာဉ် များ ဖြစ်သည့် တော်နေဒိုး၊ တိုက်ဖွန်း နှင့် ဟာရီကိန်း တို့ ကလည်း
စတင်တိုက် ခိုက် နေပြီ ဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှ တိုက်လေယာဉ်များက ထရီပိုလီ မြို့ အနီး ကို တိုက်ခိုက်နေရာ ပေါက်ကွဲ သံများ ဆူ
ညံနေသည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ကနဦး တိုက် ခိုက်မှု တွင် လစ်ဗျား စစ် တပ် ၏ တင့်ကား လေး စီး နှင့် တာဝေးပစ် အမြောက်လက်
နက် အနည်းဆုံး ခြောက်ခု ခန့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့သည် ဟု AFP သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လစ်ဗျား ရုပ်သံ က မူ ပြင်သစ် တိုက်လေယာဉ် တစ်စီး ကို ပစ်ချ နိုင်ခဲ့ပြီ ဟု ကြေငြာထားသည်။
ကနေဒါ နှင့် ဒိန်းမတ် နိုင်ငံ မှ တိုက်လေယာဉ် များလည်း စစ္စလီ ကျွန်း အနီး တွင် တပ် ဆွဲထား
ကာ လစ်ဗျား နိုင်ငံ အား စစ်ရေး ပစ်မှတ် များ အား လေကြောင်း မှ တိုက်ခိုက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ကဒါဖီ သည် ၁၉၈၆ ခုနှစ် က အမေရိကန် ၏ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု ကြုံတွေ့ ခဲ့ဖူးသည်
ဖြစ်ရာ အကောင်း ဆုံး ခုခံ နိုင်သည့် အရည် အချင်း ရှိသည် ဟု အမေရိကန် စစ်ရေး အကဲ
ခတ်များ က သုံးသပ်ထားသည်။
တိုမာဟောခ် ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျဉ် တစ်စီး ကို မြေထဲပင်လယ် အတွင်း ရှိ USS Barry သင်္ဘောမှ Operation Odyssey Dawn စီမံချက် အရ ပစ်လွှတ်နေ စဉ် အမေရိကန်လေယာဉ် တင် သင်္ဘော U.S.S Enterprise အားမော်လတာ နိုင်ငံ အနီးတွင် တွေ့ ရစဉ် REUTERS/Stringer
မီရခ်ျ တိုက်လေယာဉ် များ ၏ လက်ချက် ကြောင်း ကဒါဖီ ၏ လေတပ် စခန်း မီးလောင် ပျက်စီး နေစဉ် (AP Photo/Anja Niedringhaus) Original Filename: APTOPIX Mideast Libya.JPEG-07f63.jpg
Mig-23 shot down over Benghazi (ithinkmore.com)
Officials: US missile attack on Libya prepared (sfgate.com)
Libya Update: Military Intervention Will Start (businessinsider.com)
US Tomahawk Missiles Fired at Tripoli (firedoglake.com)
UK forces ‘in action’ over Libya (bbc.co.uk)
Operation Odyssey Dawn: U.S. Launches Military Strikes In Libya (huffingtonpost.com)
United States Strikes Libya (buzzfeed.com)
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Tags: Africa, Agence France-Presse, Al Jazeera, Barack Obama, Benghazi, British Armed Forces, David Cameron, Hillary Rodham Clinton, Libya, Mediterranean Sea, Middle East, Muammar al-Gaddafi, Nicolas Sarkozy, Pentagon, Samuel J. Locklear, Tomahawk (missile), U.S. Navy, United Arab Emirates, United Nations Security Council, United States, United States Navy, US Navy, USS Mount Whitney	From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← အာရပ် နွေဦး တော်လှန်ရေး ၏ ဘူမိနက်သန် လေးနှစ် ပြည့် အထိမ်းအမှတ်
ပြည်သူ့အကျိုးကို ရှေ့ ရှု မှ ပြည်သူ့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြည်သူ့ အစိုးရကောင်း →
သတင်းတွေဘာသာပြန်တင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ( လစ်ဗျား လေယာဉ် ကွင်း များ ကို ဗုံးကြဲ ခဲ့သည့် ဘီ ၅၂ Stealth တိုက်လေယာဉ်များ ) ဆိုတဲ.ပုံက ဘီ၅၂ Bomber မဟုတ်ပါဘူး ။ Boeing ကထုတ်တဲ. B-52 Stratofortress့ က Stealth Bomber မဟုတ်သလို အမေရိကန်လေတပ်မှာ လက်ရှိသုံးနေတဲ. Northrop Grumman ကထုတ်တဲ. B-2 Spirit Stealth Bomber လည်းမဟုတ်ပါဘူး ။ နောက်ပြီး ဘီ ၅၂ ဆိုတာ Fighter , Fighter Bomber မဟုတ်ပါဘူး ။Strategic bomber ပါ ။ တိုက်လေယာဉ်လို.ရေးထားလို.ပါ ။ တင်ထားတဲ.ပုံထဲက လေယာဉ်ဟာ ဘယ်နိုင်ငံကမှမထုတ်သေးတဲ. ကွန်ပြူတာနဲ.ဖန်တီးထားတဲ.ပုံတွေပါ ။
March 22, 2011	thura	#
wellcome to war ?
March 21, 2011	min_aphay	#
ခုဆိုနဲနဲသတင်းရတော့ တွေးတွေးပြီးခံစားနေလောက်ပြါီ့ နေပြီတော်ကလူတွေ ဟုတ်ဘူးလား
March 21, 2011	htin	#
ကဒါဖီ ပြီးရင် သန်းရွေ အလှည့် ပေးလိုက်ပါအုံး သူလဲ တိုမာဟောခ် ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည် လေဘာလေ လိုချင်မှာပေါ့
March 21, 2011	ကြပ်ပြေးခွေးဂျိုကာသို့ 	#
တရုပ်ပစ္စည်အကြီးကြီးက မင်းအိမ်ကမင်းအမေနဲ့ မင်းညီမတွေ အတွက်ပဲသုံးလို့ ရတယ်…၂၀၀၀ ခုနှစ်ကျော်လောက်မင်းပထွေး ထိုင်းကမင်းဖင်လာချသွားတာ အနာတောင်ကျက်သေးရဲ့ လာ ပြန်ကြည့်ဦး
March 21, 2011	Twenty One	#
ပြင်သစ်..ဗြိတိန်..စပိန်.နော်ဝေ.ဒိန်းမတ်..အီတလီ..အမေရိကန်စသည်တို့ ကို…ကျွှန်တော့ အစ်မ.ညီမတွေကို..
မျိုးဖေါက်လက်ဆောင်ပေးမယ်..ကျွှန်တော်တို့ ပြည်သူကိုမတရားအုပ်ချုပ်နေသည့်မြန်မာနိုင်ငံ.ခေါ် သန်းရွှေနိုင်ငံသို့ 
မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ဖို့ အမေရိကန်မလာဘူး…ရခိုင်မင်းသားချောလေး…နေတိုး လာတောမယ်..သန်းရွှေဖင်ကို…
ဆီဆွတ်ထားပါ…မြန်မာပြည်ကို..လာပြီးဗုံးကြဲရင်…ငါတို့ ပျော်တယ်..လူ့ အခွင့်အရေးမရှိတဲဖိနှိပ်မှု့ အောက်မှာ
ထားပြီးအခါ..၁၀၀..သေပြလိုက်မယ်…..မြန်မာပြည်ကအုပ်ချုပ်မှု့ ကောင်းလို့ ကမ္ဘာ့မီဒီယာလောကမှာ.ထိပ်ဆုံး
ရောက်နေတာလို့ မှတ်ထားကြ…အုပ်ချုပ်သူကောင်းလို့ အဖေကိုကျော်ပြီး ပထွေးကိုခေါ်နေတာလို့ မှတ်…အိမ်နီးနားချင်း
မြန်မာပြည်ကိုဝေဖန်ကြတာ..ကောင်းလို့ လားဆိုတာကို…joker တို့ စဉ်းစားပေါ..မြန်မာနိုင်ငံကို..ခင်ဗျားတယောက်
ထဲ့ပိုပြီချစ်နေတယ်လို့ တကိုယ်ကောင်းမထင်လိုက်ပါနဲ…ကျွှန်တော်တို့ ကအသက်နဲလဲပြီးပိုချစ်တဲသူ..အသိညာဏ်
နဲရင်းပြီးပိုချစ်တဲလူ..အမျှော်အမြင်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ကြည့်ပြီးချစ်တဲ့ သူတွေဆိုတာ..မင်းတိုလိုအကောင်မျိုးတွေ
ကျွှန်တော်တို့ တွေရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးနားလည်ထားသင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်…joker……!
March 21, 2011	ချိန်တန်ပြီ	#
Good Comment , I agree with you….
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အာဏာရှင်စနစ် အမြန်ဆုံးပျောက်ကွယ်ပါစေ…
March 20, 2011	real joker	#
မင်းတို့ အမေရိကန်တွေ လာရဲ လာကြည့်လေ… တို့မှာ တရုတ်ပစ္စည်း အကြီးကြီးရှိတယ် ဘာပူလဲ..လာစမ်းရဲ ရင် စမ်းကြည့်လိုက်…မအေလိုး အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းတဲ့ ကောင်တွေ…. ခုလို ကောင်းကောင်းနေ ကောင်းကောင်းစားနေရတာတောင်မှ ငြိမ်ငြိမ် မနေကြဘူး…. အတော့်ကို ယားနေတယ်ဟုတ်လား… မင်းတို့ဖင်ကို အမေရိကန်ကောင်တွေ အလိုးခံလိုက်ကြ.. :(
March 20, 2011	နေပြည်တော်သူ မမဲတူ	#
ခက်တော့တာဘဲ ဂျိူကာမ ရေ နင်ကတရုပ်ပစ္စည်းကို ကြီးလှပြီထင်နေတာကိုး
March 21, 2011	Yeah Right!	#
Hero if u hate americans so much stop using the internet that americans created. or your computer.
March 20, 2011	htin kyaw	#
Hero & Real Joker you guys gonna be regret like former MI Officers & foreign affair U Win Aung.
March 20, 2011	ချိန်တန်ပြီ	#
မောင် hero လေး … ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး သွေးရူးသွေးတန်းတွေ ဖြစ်နေတာတုန်း… တော်တော်ကြောက်နေပြီလားကွ…
ငါတို့ပြည်သူတွေဘ၀က သန်းခေါင်ထက်တော့ ညဉ့်မနက်တော့ပါဘူးကွာ … မကြောက်ပါနဲ့… ဇီးထုပ်လေးဘာလေး ဆောင်ထား… အိပ်ခါနီးရင် ဇီးထုပ်တစ်ထုပ်လောက် စားပေး… နှလုံးငြိမ်တယ်ကွ… ဟား ဟား… စစ်တပ်ကကောင်တွေ တော်တော်ကြောက်နေကြပြီ ထင်တယ်… ငါတခုလောက် မေးကြည့်ချင်လို့ကွ… ” တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မတော်သာ အဖ ” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အရဆိုရင် မင်းတို့ကို ဦးသန်းရွှေတို့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့က မွေးပေးလိုက်တာလားကွ… အဲဒါကြောင့် မင်းတို့တွေ ဒီလောက်ထိ ဟောင်နေကြတာ… မင်းတို့အကောင်တွေကို (၉)လလွယ် (၁၀)လဖွားခဲ့ရတဲ့ မွေးသမိခင်နဲ့ ဖခင်တွေကွာ ဘယ်လောက်များ “၀မ်းရေ” စပ်လိုက်မလဲ… ” အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်း” ဆိုတာလည်း မင်းတို့ကို ပြောတာပဲကွ… မသိရင် မှတ်ထား… မင်းအမေတို့ အဖေတို့ကို သနားတယ်ကွာ… တကယ်ပါ… မဆလခေတ်မှာတောင် “ပြည်သူသာ အမိ၊ ပြည်သူသာ အဖ” လို့ပဲ သုံးခဲ့တာကွ… မင်းတို့စားနေတဲ့ ထမင်းတွေကို ပြည်သူတွေကအပင်ပန်းခံပြီး တိုင်းပြည်ကာကွယ်နေတဲ့ မင်းတို့ကို ကျွေးထားတာကွ… ပြည်သူတွေ ကျွေးတဲ့ထမင်းစား ပြည်သူတွေကို သတ်နေတာကို မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်း … ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် ထမင်းကျွေးတဲ့ လက်ကို ကိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲကွ… မင်းတို့သာ လူလိုစဉ်းစားတတ်မယ်… လူတွေစားတဲ့ ထမင်းစားတယ်ဆိုရင် မင်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်… ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ငါပြောတာတွေကို မင်းနားလည်တတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး… မင်းတို့ စစ်တပ်အကြောင်း ငါမသိဘူးမထင်နဲ့… မင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာ ကောင်းတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်ကွာ… တချို့ဆို စစ်သားဖြစ်လို့ အထက်အမိန့်ကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ လိုက်နာနေကြတာ… ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေကို နားလည်ပေးတဲ့ အရာရှိတွေ တပ်မတော်သားတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်ကွ… အချိန်တန်ရင် အဲဒီလူတွေအကုန်လုံး ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်……
I think your notahero because your leader generals they are low standard than gay people.No words for them.So,think about your-self.I’m very shame for you.If you close with them you will know how they are stupid & coward.I already know about them that’s why i left from Country.So poor for Burmese peoples.
March 20, 2011	zin	#
ဒီနှစ်သင်္ကြန်ထဲဆီးလို့ ကြိုမယ် အမေရိကန်ကြီးလာပါကွယ်…. လာပါကွယ်……..
တူတူ တို့ နေပူတော မှာ သူရဲကောင်းအမည်ခံ ပေမမီဒေါက်မမှီတွေဘဲရှိတာ မြန်မြန်လာပါတော့ ကိုကိုကန်ကလေးေ၇။ လာလို့ ဆိုနေတယ်နော် ခေါ်မကြားအော်မကြားနဲ့ဟင်း လူဂျိူး……
March 20, 2011	hero	#
ဟေ့ကောင်ထင်ကျော် . ချိန်တန်ပြီ မင်းတို့တွေက ဘာလဲ နေပြည်တော်ကို အမေရိကန်တွေဝင်လာပြီး မင်းညီမ ကို ဖင်လိုးတာ ကိုမြင်ချင်လို့လား လဒရဲ့ ဆောက်ပိန်းရဲ့ ..စစ်တော်တော် ဖြစ်ချင်နေလားလဒ .. မင်း အမေလင်တွေက ဇာတ်ကားတွေထဲက လိုကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး မင်းညီမကို ရှိသမျှ အပေါက်တွေအကုန်ဆော်လိုက်မှာနားလည်လား
March 20, 2011	အရိုင်း	#
ဟေ.ကောင် hero ကိုယ်.မေကိုယ်လိုးကိုယ်.နှမကိုယ်လိုးတဲ.ကောင် မင်းဟာမင်းအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးလိုးနေ။ ဒီထဲမှာလာပြီးဝင်မရှုပ်နဲ.။
March 20, 2011	ကိုလွင်ဦး (မလေး)	#
တစ်ကောင်သေ တစ်တော ရှင်းပဲ ပြီး ရင် နေပြည်တော်က အာဏာရှင်တွေ ကိုလည်း လာကြဲပေးပါ
ဒီလိုအခြေအနေရောက်လာတာ တော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်… ဆက်ကြည့်ရဦးမှာပေါ့….
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကို လှမ်းဖို့လိုပါတယ်… ကိုယ်ပိုင်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကို မလှမ်းနိုင်ပဲနဲ့တော့ ဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး… ဆက်လက်ပြီး နောက်တစ်ချက်က ဒီမိုကရေစီအတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လုပ်ကြရပါမယ်… စစ်အစိုးရရဲ့ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကို အံတုနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ လက်နက်ကိုင်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်….
ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်လာဖို့အတွက် လစ်ဗျားက ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေဟာ ကဒါဖီအစိုးရရဲ့ ထိုးစစ်ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့လို့ပါ… အဲဒီလိုသာမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ အခြေအနေတွေလဲ တမျိုးတဖုံပြောင်းလဲသွားမှာပါပဲ…
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုကွာခြားသွားတာက လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မဲခွဲတုန်းက စစ်အစိုးရရဲ့ ပထွေးတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်တို့လိုအကောင်တွေက ဘာမဲမှ မပေးပဲနေခဲ့တာပါ… တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီ တရုတ်တို့ ရှရှားတို့က ဒီအတိုင်းထိုင်နေမှာလား ဆိုတာက စဉ်းစားစရာမေးခွန်းတစ်ခုပါ…..
March 20, 2011	ံဟဲဟဲ	#
လစ်ဗျားြ​ပီး​ရ​င်ေ​န​တိုး​နှ​င့်​အေ​မ​ရိ​ကန်တပ်များေ​နြ​ပ​ည်ေ​တာ်​သို့​​မ​လာနို​င်ေ​အာင်ဗ​မာ​စစ်ဗိုလ်ချုပ်များေ​ဗ​ဒင်ဆ​ရာ​တ​စ်​ဦး​၏​လ​မ်း​ညွှန်မှူြ​ဖ​င့်​ယြ​တာ​ချေ​ရ​န်ြ​ပင်ဆ​င်ေ​န​သည်ဟု​သ​တ​င်း​ရ​ရှိ​ပါ​သ​ည်။ ယြ​တာ​မှာ ယ​ခ​င် ထ​မီ​ဝတ်ဗိုလ်ချုပ်များ ဇနီး၊ သ​မီးများ​က​အကူအညီြ​ဖ​င့်​အတွ​င်း​ခံ​မ​ပါ​ပဲ ထ​မီများြ​ပန်လည်ဝတ်ဆင်လာြ​ပီး ယေ​န့​​ည ၉ နာရီ​တိတိ​တွ​င်ေ​နြ​ပ​ည်ေ​တာ်​စ⁠စ်ေ​ရးြ​ပ​ကွ​င်းြ​ကီး​ထဲ​တွ​င်ေ​ရှ့​-င်၊ေ​နာ​က်-ီး​တေြ​ဖာ​င့်​တ​ည်း​တ​တေ​ယာက်တ​န်း​တန်း​စီ​၍ ထ​မီ​ဝတ်ဗိုလ်ချုပ်များ​တေ​ယာက်ဖင်တေ​ယာ​က် ဆ​င့်ချ​ရ​န်ြ​ဖစ်သ​ည်။ နိုင်ငံေ​တာ်​အြ​ကီး​အကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြ​ကီး​သန်းေ​ရွှ​မှာ​မူ ကျ​န်း​မာေ​ရး​အရ လူ​တန်း​၏ေ​နာက်ဆုံး​မှေ​န​မ​ည်ြ​ဖစ်သ​ည်။ ၎င်း​ပါ​ဝင်ဆ​င်နွှဲ​မ​ည်၊ မနွှဲ​မည်ဆို​သည်ကို သ​တ​င်း​အတိ​အကျ မ​ရေ​သး​ပါ။
March 20, 2011	Kim	#
သ​တ္တိ​ခဲ​ဗမာ​ဘို​ရှူပ်ချီးေ​တွေ​ရာ​ဘယ်လိုေ​နြ​က​မ​လဲ​မ​သိ​ဘူး။ တပ်ချုပ်ချီး​သန်းေ​ရွှေ​သွး​ရူးေ​သွး​တန်း​နဲ့ေ​တ​ဇ​ကို​ရု​ရှား​လွှ​တ်ြ​ပီး Air Defense Systemsေ​တွ​သွား​ဝယ်ခို​င်းေ​နြ​ပီ​ထင်တ​ယ်။
March 20, 2011	American King	#
*** We are coming !!!
We never approve those burmese tyranny’s new hide out as the new Capital. We and the International community only recognize Rangoon as the one and the only one Capital of Burma, period !
You burmese people must call it “kyat pyae” only.
After finished libya.Please,Come to Nay pyi daw.
March 20, 2011	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,728,534 hits